သိပီးသူတိုင်း အကုသိုလ်အလုပ်တွေ ကို တော်တော်ကြောက်သွားရမယ့် ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက် အကြောင်း(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ) – Shwe Likes
သိပီးသူတိုင်း အကုသိုလ်အလုပ်တွေ ကို တော်တော်ကြောက်သွားရမယ့် ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက် အကြောင်း(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဖတ်သင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ)
ဒီ ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက်အကြောင်းကို သိထားတဲ့သူတွေတိုင်း အကုသိုလ်အလုပ်ကို တော်တော်ကြောက်သွား ပါလိမ့်မယ်..။ ဝဋ်ကြွေး ၁၉ ချက် အကြောင်း သိကောင်းစရာများကို….(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ ဖတ်သင့်တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ)
၁. ဒီဘဝမှာ လက်ဝတ်ရတနာများ နှင့် အဝတ်ကောင်းများဝတ်ဆင်နိုင်ခြင်းဟာ အရင်ဘဝက သင်ဟာ သံဃာ​တော်​များအား သင်္ကန်းကပ်လှု ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၂. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အစားအသောက်ကောင်းများဖြင့် နေရပါသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ဆွမ်းလှူ ခြင်း၊ မရှိဆင်းရဲသားတွေကို ပေးကမ်းလှုဒါန်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၃. ဘာဖြစ်လို့ ဒီဘဝမှာ ဆင်းရဲပြီး အဝတ်ကောင်းတွေ မဝတ်နိုင်ရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက နှမြောတွန့်တိုခြင်း၊မစ္ဆရိယ စိတ်များ၍ ပေးကမ်းခြင်း လှူ ဒါန်းမှုမရှိခြင်း၊ အလှူ မလုပ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၄. ဒီဘဝမှာ ကိုယ်ပိုင်တိုက်ကြီး ခြံကြီးများနှင့် နေနိုင်ခြင်းဟာအရင်ဘဝက ဒါနကောင်းမှုအစုစုနှင့် ​ပေးသင့်​​ပေးထိုက်​တဲ့​နေရာ​တွေမှာ အကူအညီ ဆန်စသည့်​ ပစ္စည်းဝတ္ထု အလှုပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ တိုးတက်အောင်မြင်ပြီး ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုင်ဆိုင်နေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက သူ​တော်​​ကောင်းများ​နေထိုင်​ရာ အ​ဆောက်အဦးဆောက်ဖို့ ငွေလှုဒါန်းခြင်း၊ပစ္စည်းလေးပါးလှူ ဒါန်းခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်သည်။
၆. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သင်ဟာ လှပကျော့မော့နေရပါသလဲဆိုရင်တော့ အရင်ဘဝမှာ သင်ဟာ ဘုရားရွှေသင်္ကန်းကပ်ခြင်း၊ သံဃာတော်များကိုသင်္ကန်းလှူ ဒါန်းဆပ်ကပ်ခြင်း၊ မရှိတဲ့သူတွေကိုအဝတ်ပေးလှူ ခြင်း ၊ ဘုရားပန်းကပ်လှုခြင်းစသည်တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
၇. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ ပညာရည်မြင့်မားနေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝမှာ ဘုရားတရားများနှင့်ပျော်မွေ့ နေသူလည်း ဖြစ်သည်။ ဆီမီးလှူ ဒါန်း၊ပညာဥာဏ်အလင်းရောင်ပေးလှူ ခြင်း၊ ပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
၈. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သင်က ချစ်ခင်သူပေါများပြီး သူငယ်ချင်းအခြွေအရံများနှင့် ပြည့်စုံနေရပါသလဲဆိုရင်တော့ အရင်ဘဝမှာ ကောင်းကျိုးများဖြင့်သာ ကူညီခဲ့ခြင်း၊သူတစ်ပါး ချ စ်ခြင်းကိုမခွဲခဲ့ခြင်း၊သင့်မြတ်အောင်ပြောဆိုပေးခြင်းတို့ ကြောင့် ဖြစ်သည်။
၉. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ မိဆုံဖဆုံဖြင့် နေရသလဲဆိုရင်တော့ အရင်ဘဝမှာရိုသေလေးစားပြီး အကူညီပေးတတ်သူနှင့် ဘက်မလိုက်ခြင်း၊သူတစ်ပါးအသိုက်အမြုံ ကိုမဖျက်စီးခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၀. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ မိဘမဲ့ကလေးဖြစ်နေရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝက ဌက်ပစ် ၊ ငါးမျှား ၊တိရိစ္ဆာန်တွေရဲ့အသိုက်အမြုံများကို ဖြို ချ ဖျက်စီးခဲ့ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၁. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သက်ရှည်ကျန်းမာနေရသလဲဆိုတော့ သူတစ်​ပါးအသက်​ကို မသတ်​ခြင်း အရင်ဘဝမှာ ဌက်လွှတ်၊ ငါးလွှတ်၊နွား စသည့် သက်ရှိသတ္တဝါလေးတွေကို လွှတ်ပေးခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၂. ဘာကြောင့် ဒီဘဝမှာ အသက်တိုရသလဲဆိုတော့ အရင်ဘဝကသူတစ်ပါး အသက်၊တိရိစ္ဆာန်များကို သတ်ဖြတ်​ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၃. ဒီဘဝမှာ ဘာလို့ သူတစ်ပါးရဲ့ အခိုင်းစေအဖြစ်နေရပါသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝမှာ မရှိဆင်းရဲသားများကိုနှိမ်ထားခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၄. ဘာ့ကြောင့် သင့်မျက်လုံးက ဒီဘဝမှာ လှပနေရသလဲဆိုတော့အရင်ဘဝက ဘုရားမှာ ဆီမီးပူဇော်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အသိပညာမဲ့ ၊ နားမကြား သူတစ်ယောက် ဖြစ်ရပါသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝက ​ကျေးဇူးရှင်​ မိဘရှေ့တွင် ကြမ်းတမ်းစွာ ဆဲဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၆. အဘယ့်ကြောင့် ဒီဘဝမှာ အဆိပ်နှင့်ပတ်သက်၍ သေရသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝက စမ်းရေ ၊ သောက်သုံးရေများကို အဆိပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၇. ဘာကြောင့် ဒီဘဝမှာ ဆွဲကြိုးချပြီး သေဆုံးရပါသလဲဆိုရင် အရင်ဘဝကသက်ရှိလူ၊ တိရိစ္ဆာန်များကို ထိုနည်းကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
၁၈. အကယ်၍ ဒီဘဝမှာသူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်ဖြတ်ညှင်းဆဲတဲ့သူသည်၊နောင်ဘဝမှာတူသောအကျိုးကိုယ့်ကိုတစ်ခါ အသတ်ခံရလိမ့်မည်။ ဘယ်တော့မှ မဆုံးနိုင်တဲ့ သံသရာဆက်ကွင်းဖြစ်ပါလိမ့်မည်။သံသရာလည် နေမည်။
၁၉. ဒီဘဝမှာ ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်း ဒီသံသရာအကြောင်းတွေ၊တရားအကြောင်းတွေ ဆက်ပြီးပြောပြသွားနိုင်မယ် ဆိုရင် နောက်ဘဝမှာ ကောင်းကြောင်းနဲ့ လူတွေရဲ့ ရိုသေလေးစားခြင်းကို ခံရပါလိမ့်မယ်။ (မူရင်းရေးသားသူအား credit ပေးပါသည်။)
ဒီ ဝဋျကွှေး ၁၉ ခကျြအကွောငျးကို သိထားတဲ့သူတှတေိုငျး အကုသိုလျအလုပျကို တျောတျောကွောကျသှား ပါလိမျ့မယျ..။ ဝဋျကွှေး ၁၉ ခကျြ အကွောငျး သိကောငျးစရာမြားကို….(ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျတို့ ဖတျသငျ့တဲ့ ဗဟုသုတလေးပါ)
၁. ဒီဘဝမှာ လကျဝတျရတနာမြား နှငျ့ အဝတျကောငျးမြားဝတျဆငျနိုငျခွငျးဟာ အရငျဘဝက သငျဟာ သံဃာတျောမြားအား သင်ျကနျးကပျလှု ခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈပါသညျ။
၃. ဘာဖွဈလို့ ဒီဘဝမှာ ဆငျးရဲပွီး အဝတျကောငျးတှေ မဝတျနိုငျရသလဲဆိုတော့ အရငျဘဝက နှမွောတှနျ့တိုခွငျး၊မစ်ဆရိယ စိတျမြား၍ ပေးကမျးခွငျး လှူ ဒါနျးမှုမရှိခွငျး၊ အလှူ မလုပျခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ တိုးတကျအောငျမွငျပွီး ပြျောရှငျမှုတှေ ပိုငျဆိုငျနရေသလဲဆိုတော့ အရငျဘဝက သူတျောကောငျးမြားနထေိုငျရာ အဆောကျအဦးဆောကျဖို့ ငှလှေုဒါနျးခွငျး၊ပစ်စညျးလေးပါးလှူ ဒါနျးခွငျးတို့ ကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၆. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သငျဟာ လှပကြော့မော့နရေပါသလဲဆိုရငျတော့ အရငျဘဝမှာ သငျဟာ ဘုရားရှသေင်ျကနျးကပျခွငျး၊ သံဃာတျောမြားကိုသင်ျကနျးလှူ ဒါနျးဆပျကပျခွငျး၊ မရှိတဲ့သူတှကေိုအဝတျပေးလှူ ခွငျး ၊ ဘုရားပနျးကပျလှုခွငျးစသညျတို့ကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၇. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ ပညာရညျမွငျ့မားနရေသလဲဆိုတော့ အရငျဘဝမှာ ဘုရားတရားမြားနှငျ့ပြျောမှနေ့သေူလညျး ဖွဈသညျ။ ဆီမီးလှူ ဒါနျး၊ပညာဉာဏျအလငျးရောငျပေးလှူ ခွငျး၊ ပဋ်ဌာနျးရှတျဖတျပူဇျောခွငျးတို့ဖွဈသညျ။
၈. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သငျက ခဈြခငျသူပေါမြားပွီး သူငယျခငျြးအခွှအေရံမြားနှငျ့ ပွညျ့စုံနရေပါသလဲဆိုရငျတော့ အရငျဘဝမှာ ကောငျးကြိုးမြားဖွငျ့သာ ကူညီခဲ့ခွငျး၊သူတဈပါး ခြ ဈခွငျးကိုမခှဲခဲ့ခွငျး၊သငျ့မွတျအောငျပွောဆိုပေးခွငျးတို့ ကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၁၀. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ မိဘမဲ့ကလေးဖွဈနရေသလဲဆိုတော့ အရငျဘဝက ဌကျပဈ ၊ ငါးမြှား ၊တိရိစ်ဆာနျတှရေဲ့အသိုကျအမွုံမြားကို ဖွို ခြ ဖကျြစီးခဲ့ ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၁၁. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ သကျရှညျကနျြးမာနရေသလဲဆိုတော့ သူတဈပါးအသကျကို မသတျခွငျး အရငျဘဝမှာ ဌကျလှတျ၊ ငါးလှတျ၊နှား စသညျ့ သကျရှိသတ်တဝါလေးတှကေို လှတျပေးခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၁၅. ဘာလို့ ဒီဘဝမှာ အသိပညာမဲ့ ၊ နားမကွား သူတဈယောကျ ဖွဈရပါသလဲဆိုရငျ အရငျဘဝက ကြေးဇူးရှငျ မိဘရှတှေ့ငျ ကွမျးတမျးစှာ ဆဲဆိုခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၁၆. အဘယျ့ကွောငျ့ ဒီဘဝမှာ အဆိပျနှငျ့ပတျသကျ၍ သရေသလဲဆိုရငျ အရငျဘဝက စမျးရေ ၊ သောကျသုံးရမြေားကို အဆိပျခတျခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၁၇. ဘာကွောငျ့ ဒီဘဝမှာ ဆှဲကွိုးခပြွီး သဆေုံးရပါသလဲဆိုရငျ အရငျဘဝကသကျရှိလူ၊ တိရိစ်ဆာနျမြားကို ထိုနညျးကဲ့သို့ ပွုလုပျခဲ့ခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
၁၈. အကယျ၍ ဒီဘဝမှာသူတဈပါးအသကျကို သတျဖွတျညှငျးဆဲတဲ့သူသညျ၊နောငျဘဝမှာတူသောအကြိုးကိုယျ့ကိုတဈခါ အသတျခံရလိမျ့မညျ။ ဘယျတော့မှ မဆုံးနိုငျတဲ့ သံသရာဆကျကှငျးဖွဈပါလိမျ့မညျ။သံသရာလညျ နမေညျ။
၁၉. ဒီဘဝမှာ ဓမ်မမိတျဆှတေို့လညျး ဒီသံသရာအကွောငျးတှေ၊တရားအကွောငျးတှေ ဆကျပွီးပွောပွသှားနိုငျမယျ ဆိုရငျ နောကျဘဝမှာ ကောငျးကွောငျးနဲ့ လူတှရေဲ့ ရိုသလေေးစားခွငျးကို ခံရပါလိမျ့မယျ။ (မူရငျးရေးသားသူအား credit ပေးပါသညျ။)
အိမ်ထောင်ရှိလျက် ဖောက်ပြန်တာ တဏှာကြီးပြီး ဉာဏ်ရည်နိမ့် လို့ပါ… ( မေသင်္ကြန်ဟိန်း (မြစ်မခ) )
မိန်းကလေးတွေ လမ်းလျှောက်တဲ့ အခါ ချစ်သူလက်ကို တွဲထားချင်တာ ဘာကြောင့်လဲ
ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ အတွက် နေ့နံအလိုက် နေ့စဉ် အကောင်းဆုံး နဝင်း အချိန်များ
လာမည့် ၆လ ပိုင်းတွင် စိုးရိမ်ရေမှတ်များ အထက်သို့ ကျော်လွန်နိုင်သာ ဒေသများနှင့် နှင့် မိုးအားကောင်းနိုင်သည့် နိုင်သော ဒေသများ